Ogaden News Agency (ONA) – CADKANOW KU CUNAY AMA KU CIIDEEYAY, WAA CAQLIGA TALISKA ADIS ABABA! By: Xaaji M/Rashiid
Waxaa yaab iyo amaakaag la kulmi cid kasta oo si wanaagsan u dhuuxda qaab dhaqanka Maamulka ay kooxda Tigreegu horboodayso iyagoo waqtigan maraya 25 sano isla markaana ay wali bartoodii taaganyihiin. Qofka bani,aadamka ah waxaa wanaagsan inuu ka faa’iidaysto fursadaha nolosha ee soo mara waana inay wax u siyaadaan. Waa inuu gartaa qiimaha nolosha, sidoo kalana waa inuu wax ka qaataa iLbaxnimada iyo horumarka kasocda dunida ku xeeran. Waxaa kamid ah nolosha wanaagsan inaad waji fiican ka kasbato umadaha dunida gaar ahaan inta jaarka kula ah ama waxbadani idinka dhaxeeyaan si macaamilku u hagaagu nabadna ugu noolaato.
Intaasi waa inta ruux kastaayi fahmayo oo lagama maarmaanka ah. Waxaa kale oo wanaagsan in ruux kasta is waydiiyo maxay dunidu kaa dheeftay ood usoo kordhisay, hadii aadanse waxba soo kordhinin dhibkaagii ma laga nabad galay? dhamaan qodobadaas muhiimka u wada ah nolosha waa laga madoobeeyay Qabiilka Tigreega! Maanta oo umadihii wada hurumareen qaarkoodna la sheegayo inay Cirka u sahamiyeen, qaarkoodna la sheegayo inay Badaha quuseen ayuu qabiilka Tigreegu marayaa Darajada waraabaha ee ah inuu dhib uun lasoo taagnaado dheef warkeedba daaye!
Qabiilka Tigreega waxaan odhan karaa waa Masiibo Cago loo yeelay oo ku habsatay Geeska Afrika. Markay soo cuneen shucuubtii ku hoos jirtay oo ay u adeegsadeen dhaqaalihii dunidu ku caawisay, kadib waxay dhib wayn u gaysteen wadamada jaarka ah sida Ererteria, Somaliya, Kenya, Suudaan iyo Jabuuti, xisaabna maleh inta jeer ay xuduudaha ka talaabeen ee ay dad soo laayeen ama ay hanti soo boobeen! Waxaa iiga sii daran markaan maqlo Ururka Midowga Afrika (African Union) ayaa ku shiraya Adis Ababa- waxaa is waydiin mudan Talow ururkaas miyaa la sixray maxay wax la fahmi la’yihiin! miyayna arkin dabka afarta gees kaga holcaya Adis, haday waxuun xalinayaan may hoos u eegaan qowmiyadaha itoobiya ee af walba ku barooranaya, Kollayba waxaan isleeyahay waa Urur baahi wayn u qaba in Culimo loo fadhiisiyo oo la quraamo ama Haween loo fadhiisyo oo la cuudiyo! Markaan cabiro aragtidayda ku aadan ururkaas waxaan usoo jeedinayaa dhaliil xoogle, marka labaadna waxaan is badal ka sugayaa markii Ururka PAFD oo hogaaminaya 5 Dawladood ay kusoo biiraan saaxada ururka Midowga Afrika een magiciisa soo xusay!
Waxay dad badan iyo dawladaba lasocdaan ceebta ay dhex fadhiyaan maamulka ugu sarreeya waxa loogu yeedho itoobiya mana jirto cid soo tiro koobi karta fashilka dhan walba ah ee haysta maamulkaas, sidoo kale waxaa tiro beelay gabood falada ay kula kaceen shucuubta aan hubaysnayn gaar ahaan qeybaha ugu nugul sida Ardada iyo wixii lamid ah! Haday in muddo ah asturaayeen Maamulka Adis Ababa maanta waxba uma asturna oo wax waliba banaankuu yaalaa. Ciwaanka maqaalkan oo ah xikmad soomaaliyeed waxaan filayaa in loogu duur xulay mid xaasidnimo iyo hunguri ku caambaxay isagoo ficilkiisu tilmaamayo- Cadkanow ku cunay ama ku ciideeyay oo la micna ah- waxayga iyo waxaaga iyo waxa inaga dhaxeeyaba anaa cunaya, hadii kale intoon Sacabada ciido kasoo buuxsado ayaan dusha kaga shubi! Si kastaba udhigoo waxay xikmaddu si dhab ah u fasiraysaa Caqliga Taliska Adis Ababa oo sidaa aaminsan.
isku soo wada jamciyoo sheekadii Taliska Ababa ayaa maraysa meel ay wax badan sugayeen ree Ogadenya oo ah inay Qowmiyadaha u af duuban maamulkaas fadhiga ka kacaan, qayilaadana iska joojiyaan, Hangoolkana midigaystaan, waana mida haatan kooxdii Tigreega ka dhigtay ilko doofaar lasahansay oon cidina ka waabanaynin.